Kenya & Al-Shabaab oo ka hadley duqeyntii shaley ka dhacdey magaalada Kismaayo – SBC
Kenya & Al-Shabaab oo ka hadley duqeyntii shaley ka dhacdey magaalada Kismaayo
Iyadoo maalinimadii shaley galinkii dambe duqeyn xaga cirka ah diyaarado dagaal ka geysteen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa soo baxaysa faahaafinta la xiriirta weeraradaasi.
Duqeyntan ayaa la sheegay inay geysteen laba diyaaradaha dagaalka gaar ahaan nooca MIG 29, waxaana soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira duqeyntaasi.
Dawlada Kenya ayaa sheegatey inay ka dambeysay weerarkaasi duqeynta ah, iyadoo Ra’isalwasaaraha Kenya Raila Odinga uu dusha u ritay masuuliyada weerarkaasi duqeynta oo ku sheegay in ay ku bartilmaamaysanayeen goobo muhiim ah oo ay xoogaga Shabaabku ku leeyihiin gudaha iyo daafaha magaalada Kismaayo.
Raila Odinga ayaa ku goodiyey inay sii wadi doonaan weerarada caynkan ah ilaa iyo inta sida hadalka uu u dhigay laga ciribtirayo Soomaaliya kooxda Al-Shabaab.
Dhinaca kale Gudoomiyaha maamulka Xarakada Al-shabaab ee gobolka J/hoose Shiikh Abuukar Cali Aadan ayaa ku tilmaamay weerarka Kenya mid fuleynimo ah isagoo meesha ka saarey in wax khasaare ah aanay geysan weeraradaasi oo uu sheegay in mid ka mid ah gantaalada uu ku dhacay meel bacaad ah.
Sheekh Abuukar wuxuu ugu baaqay dadka magaalada Kismaayo inaanay wax walwal iyo cabsi ah ka muujin weerarkaasi duqeynta ah, ayna ka qayb qaataan sidii la isaga difaaci lahaa weerarada & gardarada Kenya ku soo qaadey Soomaaliya.
Dawlada KMG oo ka hadashay weerarkaasi ayaa sheegtey in khasaare loogu geystey Al-Shabaab sida uu sheegtey Col. Warfaa Sheekh Aadan Dheere oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawlada KMG ee gobolada Jubooyinka.